RIKOODH: Harry Kane oo waa waynka ku biiray kaddib goolkii uu ka dhaliyay kooxda Bournemouth – Gool FM
RIKOODH: Harry Kane oo waa waynka ku biiray kaddib goolkii uu ka dhaliyay kooxda Bournemouth
(London) 15 Abriil 2017 – Weeraryahanka kooxda Tottenham ee Harry Kane ayaa Rikoodh cusub ka dhigay horyaalka Premier League kaddib goolkii uu u dhaliyey kooxdiisa kulankii dhowaan soo dhammaaday ee ay 4-0 uga badiyeen Bournemouth.
Harry Kane waxa uu dhaliyay goolkiisii 20-aad ee Premier League ee kal ciyaareedkan waan sanadkii saddexaad oo xiriir ah uu dhalinayo 20 gool iyo ka badan.
Xiddiga xulka Ingiriiska ee Kane waxa uu sidaas ku noqday noqday laacibka 4-aad ee saddex sano oo xiriir ah horyaalka Premier League ka dhaliya 20 gool iyo in ka badan.
Kane ayaa dhaliyey 21 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkii 2014/15, ka hor inta uusan 25 gool oo Premier League ah dhalin kal ciyaareedkii 2015/16.
Saddexda xiddig ee sidaan oo kale saddex sano oo xiriir ah horyaalka Premier League ka dhaliya 20 gool iyo in ka badan ayaa waxa ay kala yihiin Shearer, Henry iyo Van Nistelrooy.
Dhinaca kale Tottenham ayaan guuldarro kula kulmin hal kulan xitaa garoonkeeda White Hart Lane, waxaana ay ku gaareen 19 guulood iyo labo barbaro, mudadaas waxa ay dhalisay 60 gool waxaana looga dhaliyey 11 gool 14 kulan ayeyna shabaqood gool ka ilaashadeen.
Sidoo kale Spurs waa kooxdii ugu horreysay ee shabaqeeda oo nadiif ah garoonka ka baxday 15 kulan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
EPL: Kooxda Tottenham oo ku soo dhawaatay Chelsea, kaddib markii ay afar gool afka u galisay Bournemouth… + SAWIRRO